Tamaandhada Tamaandhada Qasacadeysan
Sachet Tamaandho Tamaandho
Durbaanka Tamaandhada Dabka
SUPER SEPTEMBER ayaa imanaya- XULASHADA UGU FIICAN IYO DHAQAALAHA UGU FIICAN
Sebtembar waxay u taagan tahay xilligii goosashada, dalagga cusub ee yaanyada waa la goostay, waxaanan ku dhownahay inaan bilowno bisha Sebtember ee weyn. Waxaan siin doonaa qiimo dhimis weyn macaamiisha cusub iyo kuwii hore. Ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto wixii faahfaahin dheeraad ah! Tel/Whatsapp/Wechat: +86 158 3391 1611
Ku soo dhawow Qolka fadhiga Canton Fair
Toddobaad ayaa laga joogaa markii la furay Bandhigga Canton ee 129 -aad, dhammaan alaabteennu aad bay ugu mashquulsan yihiin baahinta tooska ah. Dhammaantood waa iibin qurux iyo xirfad leh. Baahinta tooska ah, waxaan si faahfaahsan ugu soo bandhigi doonnaa faahfaahinta alaabta. Haddii aad waqti yar tahay, waxaad sidoo kale daawan kartaa dib -u -ciyaarista fiidiyaha. W ...
2021 Gulfood ee Dubai
Waxaan ka qaybgalnay Gulfood 2021, ku soo dhawow inaad na soo booqato sannadka dambe! Waqtiga: Febraayo 21— 25, 2021 Cinwaanka: Xarunta Ganacsiga Adduunka ee Dubai, PO Box 9292 Dubai, UAE
Waa maxay faraqa tamaandhada iyo ketchup?
Tamaandhada Tamaandhada Markaan ka dhigno tamaandhada la jajabiyey dhadhan aad u qaro weyn iyo isku ekaansho cufan, foomkan waxaa loo yaqaannaa xabagta yaanyada. Waxaan u adeegsan karnaa dhejiskan yaanyada dhadhan kala duwan iyo cuntooyin kala duwan sidoo kale. Tani waxay ku siinaysaa dhadhan dhab ah gumbos, maraqa, maraqa, dubitaanka dheriga iwm Ketchup Tomato The Essen ...
Hawlaha dhismaha kooxda Hebei Tomato 2019
Hebei Tomato waxay abaabushay hawlaha dhismaha kooxda ugu weyn sannadka laga bilaabo Ogosto 9 ilaa 13, 2019. Si loo kobciyo waqtiga firaaqaha ee shaqaalaha, loo fududeeyo cadaadiska shaqada, kor loogu qaado isgaarsiinta iyo isgaarsiinta ka dhexeysa shaqaalaha, loo xoojiyo wadajirka kooxda iyo ciidanka dhexe, loona habeeyo daah ...
Hebei Tomato Industry Co., Ltd. waxaa laga aasaasay Hebei, Shiinaha, maalgashiga guud waa US $ 3.75 milyan, kuwaas oo ku takhasusay farsamaynta dhammaan noocyada Baakad Tamaandho Tamaandho ah iyo Sachet Tomato Paste.
Muunad miro oo bilaash ah